Home Wararka Wasiir Khadiija” Amniga dalka aadbuu u liitaa”
Wasiirka dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye sidoo kalena ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ah ayaa walaac ka muujisay Xaaladda Ammaanka ee Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in meelo ka mid ah Soomaaliya oo Sanadkii 2016-kii gaari ay ku tagi jireen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo Mas’uuliyiinta dowladda maanta aan la tagi karin.
Wasiirka Khadiijo ayaa Mala awaal ku tilmaamay Hadallada Madaxda dowladda Soomaaliya ee ah in dalka ay ka dhaceyso doorasho qof iyo Cod ah,taasoo badalkeeda waxa ay sheegtay in la iska indho tiraayo dhibaatooyinka ka taagan dalka oo ah in meelo muhiim ah ay heystaan Al-Shabaab.
Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa xustay in 6 jeer ay tagtay Jowhar Sanadkii 2016-kii,islamarkaana 5 jeer oo ka mid ah ay raacday Gaari laakiin maanta aan la tagi karin in diyaarad la raaco mooye.
“Aniga Nabad iyo Nolol Automatically waa ka tirsanahay waa halku dhig ee Xisbi ma ahan Xildhibaanimadeyda waaa igaar anoo ah wasiir katirsan xukuumadda , Maanta ma waxaan sugeynaa in Madaxweynaha, Ra’isul Wasaaraha iyo Beesha caalamka wax ku soo heshiiyaan, Maroodi xoogiisa ilaahey ka qariyay aa tihiin ama waxaa tihiin loohar aan wali dib danbe la isu weydiineyn maanta talada idinka ayey gacantiina ku jirtaa, waa ogtihiin hadii cirka iyo dhulka la isku dhejiyo in Doorasho qof iyo cod Soomaaliya ka dhici karin, iney jinsiyad jirin yaa Soomaali ah? Waa ogtihiin iney tirakoob jirin, in xisbiyo sharciyeysan aysan jirin, nidaamka federalka iyo nuuca la qaadanayo inaadan ka hadlin, waan ognahay in xuduudaha Soomaaliya ineysan noo qorneyn, waan ognahay in amni guud ahaan uusan ka jirin dalka, waa ognahay in Dastuurka afti dadweyne uusan galin , sidaas darteed hal qof iyo hal cod kama dhici karto dalka waa inaad adinka sameysaan” ayay tiri Wasiir Khadiijo.
Xildhibaanada Shacabka ayay ku baaqday in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka dalka ka jira,islamarkaana aan lagu mashquulin doorasho iyo qof iyo Cod ah ayaa dalka ka dhaceysa.